Modifications - Wikipedia
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Jiona 2011 à 18:20
16 octets ajoutés , il y a 8 ans
Ny [[Eoropa]] dia tenenina matetika fa anisan'ny [[kontinenta]] enina misy eto an-tany. Izy io dia ny [[faritra]] andrefan' [[Eorazia]], [[faritra]] avaratry ny kontinentan' [[Afrô-Eorazia]], arakaraky ny fomba fijery. Ny solonanarany dia koe « Tontolo Antitra », satria mifanohitra amin'ny « Tontolo Vao » (ny [[Amerika]]). Ao [[Eoropa]] dia misy kolontsaina maromaro manana fianjadiana ary lova iraisany.
Ny [[Eoropa]] dia kontinenta faharoa kely indrindra eto an-tany amin'ny lafin'ny velarantaniny (10,18 tapitrisa [[kilometatra efa-mira]]), na 2%-n'ny velarana tontalin'ny tany na 6,8%-n'ny velarantany tontaliny. Misy [[firenena]] fimampolo ao Eoropa, ary ny [[Rosia]] no ngeza indrindra amin'ireo na amin'ny lafin'ny isam-ponina na amin'ny lafin'ny velarantaniny, ary ny Vatikana no [[firenena]] kely indrindra amin'ireo, na amin'ny lafin'ny isam-ponina na amin'ny lafin'ny [[velarantany]]. Ny [[Vatikana]] koa no [[firenena]] kely indrindra eto an-tany.
[[Sary:Saritan'ny Empira Romana.jpg|ankavanana|thumb|300px|Ny Empira Romana tamin'izy nivelatra indrindra]]
Any Eoropa, ny [[Grisy taloha]] no toerana nahaterahan'ny [[kolontsaina]] eoropeana. Nahazo lanja ny [[firenena]] eoropeana tamin'ny [[taonjato faha 16]], indrindra teo aorian'ny fitombohan'ny kôlônialisma. Teo anelanealn'ny [[taonjato faha 16]] sy ny [[taonjato faha 20]], ny hery eoropeana dia nanana zanatany tany [[Amerika]], indrindra tamin'ny [[taonjato faha 17]]-18, ny ankabeazann' [[Afrika]], ny [[Oseania]], ary ny singa avaratra sy atsimon' [[Azia]]. Ny Ady lehibe rehetra dia niainga avy tao Eoropa, nampahazo lanja ny [[Etazonia]] sy ny [[Vondrona Sovietika]] teo anivon'ny taonjato faha 20. Nandritry ny Ady mangatsiaka, voazara roa ny [[Eoropa]] : ny [[faritra]] andrefana dia ao amin'ny OTAN ary ny [[faritra]] atsinanana dia entin'ny Fifaneken'i [[Varsôvia]], nampidy ny Fiaro Vy na « Rideau de Fer » amin'ny [[teny frantsay]].
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/175545"